Thola ukuthi ungenza kanjani umuthi omuhle wezindebe ekhaya | Bezzia
Indlela yokwenza i-lip balm
USusana Garcia | | Ubuhle, Imikhiqizo yobuhle
Yiba nokunye izindebe ezinamanzi zibalulekile uma sifuna ukusebenzisa izindebe zomlomo zethu ezinhle kakhulu kuzo. Kepha kulokhu kufanele sibe nezimonyo ezithile eziwusizo kakhulu. Ngakolunye uhlangothi kunezihlikihliki zezindebe kanti ngakolunye umuthi wezindebe, imininingwane engeke ilahleke esikhwameni sethu nasesikhwameni sobuhle. Ngalesi sikhathi sizobona ukuthi ungenza kanjani i-lip balm, uhlobo lwezimonyo esingazenza ekhaya.
I-Los izimonyo ezenziwe ekhaya zingakhiwa ngezithako ezinhle futhi ngokuthanda kwethu, ngamakha esiwathandayo. Kungakho abantu abaningi basebenzisa izithako ezenziwe ngokwabo ukwenza lezi zinhlobo zezimonyo eziyisisekelo ezifana ne-lip balm. Kunezinhlobo eziningi zamafomula, yize sizobona ezimbalwa ukubona ukuthi ungakha kanjani i-lip balm ephelele.
1 Yini oyidingayo ngamafutha endebe
2 Amafutha wezindebe aneVaseline
3 Ibhalsamu yezinyosi
4 Amafutha omnqumo e-Virgin omuthi wakho
Yini oyidingayo ngamafutha endebe
I-lip balm ingenziwa ngemininingwane embalwa. Kufanele ube neziqukathi ezifanele zebhalsamu, ezincane. Lezi iziqukathi kufanele zihlanzwe kahle ngaphambi kokufaka izithako. Ngakolunye uhlangothi, kufanele sithole zonke izithako nokuthile esizozixuba kukho, nakho okuhlanzekile, njengenkomishi.
Amafutha wezindebe aneVaseline
La UVaseline angamane asetshenziswe njengomuthi wezindebe, yize kuwo singenza ama-balm ahlukene ngokuthanda kwethu. Sebenzisa i-petroleum jelly njengesisekelo. Ngezipuni ezimbalwa ungenza ibhalsamu ekhethekile. Zifake enkomishini bese uzifaka kwi-microwave ukuze i-petroleum jelly incibilike ukuze ukwazi ukuyixuba nezinye izithako. Ungangeza uwoyela omncane kakhukhunathi, onomsoco kakhulu futhi obandayo unokuvumelana okuhle, okulungele i-lip balm. Esinye isinyathelo ongasithatha ukufaka umbala omncane nge-lipstick noma nge-powder yeso yemvelo noma i-blush. Ngokuqondene nephunga, amafutha abalulekile angasetshenziselwa ukunikeza iphunga elikhethekile kubhalsamu bakho. Kunezinhlobo eziningi zamafutha afaka nezakhiwo zawo. Ungakhetha eyodwa efana ne-lavender noma ulamula.
Singathola ingcina yezinyosi ezitolo ezikhethekile noma kubelusi bamakhambi. Lolu hlobo lwesithako luyisisekelo kwezinye izimonyo. Kulokhu i Ingcina yezinyosi yilokho okuzonikeza ukuguquguquka komuthi wezindebe kwezimonyo zethu ezenziwe ekhaya. Ungayisebenzisa le nyosi, yize kukhona nezinketho ze-vegan ezifana ne-rice wax. Kule ngcina yezinyosi encibilikile ku-bain-marie kufanele sengeze uwoyela omncane wama-alimondi. Izoyinika ukuthamba futhi isize ukufuthisa izindebe zethu nangaphezulu. Uwoyela we-alimondi uyisisekelo esihle ongasisebenzisa ukufafaza isikhumba sonke ngoba futhi sine-vitamin E, eyi-antioxidant enkulu futhi esiza ukuvimbela ukuguga kwesikhumba. Ungafaka futhi ibhotela le-shea, isithako esiyisisekelo sokunakekelwa kwesikhumba. Leli bhotela lilungele ukufuthwa futhi linevithamini E kanye no-A.
Amafutha omnqumo e-Virgin omuthi wakho
Usebenzisa i-petroleum jelly noma i-beeswax njengesisekelo, ungasebenzisa isithako esiyisisekelo, hhayi ekudleni kwethu kuphela kepha nasekunakekelweni kwethu kobuhle. I- Amafutha omnqumo e-Virgin alungele ukuthambisa isikhumba Futhi ingasetshenziswa ngezindlela eziningi, kokubili ezinweleni nasesikhumbeni futhi njengesiqholo somlomo ngoba nayo ayinabungozi uma siyigwinya lapho siyibeka ezindebeni. Lo oyili unezinto ezinhle zokulwa ne-antioxidant ngakho-ke uzosisiza ukuthi sigcine izindebe zethu zincane futhi isikhumba sethu sinakekelwa kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Indlela yokwenza i-lip balm
Izitayela zasehlobo: isikhathi sokukhipha izikhindi zakho ekhabethe